तपाईलाई थाहा छ, विमानको भर्याङको मुनी किन बनेको हुन्छ सानो प्वाल ? : विमानसँग जोडिएका केही नसुनेका तथ्य - Aajako Nepali Khabar
Home समचार तपाईलाई थाहा छ, विमानको भर्याङको मुनी किन बनेको हुन्छ सानो प्वाल ? : विमानसँग जोडिएका केही नसुनेका तथ्य
समचार admin January 3, 20210Comment
तपाईले कत्तिको ख्याल गर्नुभएको छ, धेरैजसो विमानको रंग सेतो हुन्छ । अझ लामो रूटमा चल्ने हवाइजहाज धेरै संख्यामा सेतो रहेको पाइन्छ । बिचमा अन्य कुनै रंग मिसाएपनि धेरै भाग सेतो रहेका विमानको संख्या पनि अत्याधिक पाइन्छ । आखिर किन विमानको रंग सेतो नै बनाइन्छ होला ? कहिल्यै अनुमान गर्नुभएको छ ? यसका पपछाडी यस्ता विभिन्न कारण हुँदा रहेछन् ।
विमानलाई धेर तात्न नदिनका लागि पनि सेतो रंग लगाइन्छ । रनवेदेखि लिएर आकाशसम्म विमान घाममा रहेको हुन्छ । धेरै माथिको उचाइ भर्दा विमानमा सूर्यको किरण सीधै पर्छ अनि किरणमा भएका इन्फ्रारेडले भयंकर गर्मी उत्पन्न गर्छन् । सेतो रंगले किरण परावर्तन गर्ने भएकाले ९९ प्रतिशतसम्म किरणलाई परावर्तन गरिदिन्छ र प्लेन तात्न पाउँदैन ।
अन्य रंगको तुलनामा सेतो रंगको भिजिबिलिटी (दृश्यमानता) धेर हुन्छ । यसले गर्दा दुर्घटनाबाट बच्न सकिने विश्वास गरिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार, सेतो रंगको विमानको पुनः बिक्री मूल्य बढी हुन्छ । अनि सधैं घाममै हुँदा अन्य रंग लगाउँदा छिट्टो बिग्रन्छ जबकि सेतो रंग लगाउँदा छिट्टो बिग्रँदैन । अनि विमानलाई छिटोछिटो पेन्ट गरिरहनु पनि परेन । यसकारण धेरैजसो विमानमा सेतो रंग प्रयोग गरिँदो रहेछ ।